Amava abaThengi-kwiKhonkco elilandelayo lokuNikezela
Pooch Friendly Ukubonelela Kuqala, ndafumana le mveliso ngokungacwangciswanga kwaye andizukuvuyela into endiyenzileyo! ukuba ndikhe ndadibana noku ngokukhawuleza, ngesele indisindisile umthwalo wexesha. Uluhlu lweemveliso zabo lukhulu, zibonelela ngetape yokuhambisa kunye neebhokisi zokukunceda wakhe uphawu lwakho, njl. Isicwangciso sabo sasimahla sinika abathumeli abahamba okokuqala isicwangciso ESIKHULU apho unokongeza iimveliso ezili-1 000! Ixesha lokuthumela e-US limalunga neentsuku ezi-5 ukuya kwezi-9, elilunge ngokwenyani ngokuthelekiswa neAliexpress kunye nezinye iinkampani. Ndifumene ithuba lokusebenzisa ingxoxo yabo ebukhoma apho kukho nakuphi na ukuxhalaba endikhe ndajongana nako kwaye ndihlaziyiwe kwizicwangciso zabo zeapp kunye nendlela abazama ngayo ukuphucula, kunye nexesha elisikiweyo xa uhlaziyo lwabo luza kwenzeka. Xa uthetha nearhente yencoko ngamanye amaxesha kuphendula imibuzo yakho kwaye ayibonakalisi ubuntu kubonakala ngathi abakhathalelanga konke oko kodwa bayancokola nabo, ungabaxelela ukuba BANYANZEKILE babakhathalele abathengi babo! Ndayishiya incoko yam ndonwabile kwaye ndikhuthazekile ukuba ndiqhubeke kunye nevenkile yam kwaye ndinomdla wokuyivula ngokukhawuleza !! Ndincoma kakhulu!
amourvere Ndimtsha ekuthumeleni iiodolo kwivenkile yam. I-NextsChain inyukile njengenkonzo yokuthumela ngokukhawuleza. Kuba bendingaqinisekanga ngento emandiyenze, ndisebenzise ibhokisi yencoko ukuncokola nomncedisi onolwazi ondichazelayo ngenkonzo. Ndiqinisekisiwe ukuba ukuhanjiswa kuyakhawuleza kwaye kukhathalelwe. I-Nextschain sele ilungile ulwazi lwam ngemveliso. Ndiyayixabisa ingqwalaselo ekhethekileyo abayinika iinkcukacha, endigcinela ixesha. UMartinez
ThePretty.me INkonzo yoThutho eNcomekayo. Kungcono kakhulu kunakho konke ukukhangela kunye nokuthumela iiaphulelo endikhe ndazisebenzisa. Enkosi ngemisebenzi elungileyo kunye nokwenza ukuba ukwehla kube ngcono.
Ilungele wena Ewe ukuba ujonge ukuqala ukulahla le 2020 musa ukujonga ujikeleze kwindawo elungileyo, i-Nextchain inenkxaso kunye nazo zonke izixhobo zokuphumelela ukuba unayo nayiphi na ingxaki kwiinkonzo zabathengi kukucofa nje okumbalwa ukunceda wena kwaye usombulule kwaye ulungise ingxaki yakho. I-Nextchain sisivumelwano.
Iwayini kunye nomthandi weKofu Bendihleli ndisebenzisa le app iinyanga kwaye ngoku ndiya kusetyenziso lwevenkile yam. Ndifumene iimveliso apha endingenakuzifumana kwezinye iiapps zokufezekisa. Andifuni ukusebenzisa i-oberlo kwaye ndisebenzise i-aliexpress kuba amaxesha okuhambisa ayothusa kwaye kuya kufuneka ujongane nesigidi sabathengisi abohlukeneyo. INextschain inakekela yonke into. Ufumana iodolo kwaye uhlawule ihoseyile kwaye bayapakisha bathumele imveliso kwaye bathumele i-imeyile yokuqinisekisa ngenqanawa. Ukuba ungena kuzo naziphi na iingxaki babuyela kuwe kwaye bayilungise. Ngokoluvo lwam le yeyona app yokufezekiswa kweedropshippers.
Ivenkile ye-OM yeFashoni Ndonwabile kakhulu ngeNextschain.
Iimveliso ezininzi onokukhetha kuzo kunye nenkonzo enkulu yesinxibo.
Ndinemicimbi kwaye bandinceda kwangoko bayilungisa.
enkosi kakhulu NextsChain.
Acoti 1 Ndinolu hlelo lokusebenza ubuncinci iinyanga ezi-2 ngaphambi kokubhala olu hlaziyo. Kuphononongo oluninzi olunikezwe kusuku lwe-1 lokusetyenziswa. Olu lusetyenziso olukhulu. Ndiyigqibile isampulu yoku-odola eyayithunyelwe kanye kwixesha njengoko kuchaziwe. Ndingenise ubuncinci iimveliso eziyi-150 ngempumelelo. Ndinxibelelane nenkxaso ubuncinci amaxesha ama-5 ngempendulo efike ngexesha ngalinye. Ndingacebisa kakhulu ukuba le app iye nakubani na. Enkosi kakhulu NextsChain!
ndongeza kolu hlaziyo. Ndifuna ukwazisa wonke umntu ngamava am okwenyani ngeNextschain. Okokuqala andiyiyo ivenkile enkulu yexesha! Andikaze ndibenangxaki yokulungisa iiodolo zam ngeNextschain. Kuya kufuneka ufunde imigaqo yakhe yokusebenzisa kwaye uqaphele ukuba usebenzisa iAliexpress kwiinkonzo zakho kuthatha ixesha elide ukuhambisa! Ke ukuba ufuna ukuhambisa ngokukhawuleza KUPHELA USEBENZISE i-NextsChain ukuzaliseka. Khange ndibenangxaki yokulungisa iiodolo zam. Kwaye eyona inkulu kuzo zonke !!! Ndandinendawo yomthengi i-odolo ngoDisemba we-12. Ndandisoyika kakhulu ngayo. WOW yafika kumthengi kwiintsuku ezili-11 ekubekeni iodolo. Kwakukho ngexesha leKrisimesi kunye nomthengi kwaye ndonwabile ngokupheleleyo. Enkosi kakhulu NextsChain. Inkonzo yomthengi ilungile! Iinkwenkwezi ezili-10.
Iibhanti zeVegan zeWatch Watch Ndikhethe le app kuba ndifuna ukunika abathengi ukuhambisa ngokukhawuleza e-UK (kwaye ngokunokwenzeka kwihlabathi liphela, ekugqibeleni) njengexesha leentsuku ezingama-20-40 zokuhambisa ezivela kwabanye abathengisi zininzi kakhulu. Ndine-niche ethile yemveliso, ke bendinexhala lokuba ukhetho lwam luya kuncitshiswa, kodwa kukho imithwalo. Ndineemveliso ezingaphezu kwe-160 ezilindele ukungeniswa elizweni, kwaye zonke zikhangeleka zilungile. Amagama emveliso mahle kwaye acocekile, amaxabiso asengqiqweni okwehliswayo njl. Okwangoku andikufumani iodolo ngazo (ndiqalile) kwaye andiqinisekanga ukuba konke kungasebenza njani kumthengi okwangoku, kodwa inkqubo kwaye amava ukuza kuthi ga ngoku abe makhulu.
Inkonzo yomthengi ikwodwa. Bachubekile kwaye baluncedo, kwaye bathathe ixesha lokuthetha nawe baphendule imibuzo yakho. Ukuphendula ngokugqibeleleyo. Ndichukumisekile ngokwenene ukuza kuthi ga ngoku!
Iikota Lolu hlelo lokusebenza ngumtshintshi womdlalo weemveliso ezinkulu amaxesha amakhulu okuhambisa kunye negumbi lamaxabiso elikhulu ukwenza inzuzo ukuphindaphinda iinkonzo zabathengi zezona zinto zibalaseleyo endakha ndajongana nazo ndabaleka ndangena emxholweni kwaye yalungiswa ngexesha elifanelekileyo kwangolo suku lunye. Insiza enkulu. IiMotts zezinto zihanjiswa simahla